Shiinaha 350L / 450L Gawaarida Gawaarida –B-110A / B-110B warshad iyo soosaarayaasha | Jinqiu
350L / 450L Gawaarida Gawaarida -B-110A / B-110B
Caadi ahaan aag waliba waxay soo ururin doonaan xoogaa ama boorsooyin waaweyn oo qashin ah, waxay u baahan yihiin in loo raro saldhigga qashinka, laakiin aad ayey u badan yihiin oo aad ayey u culus yihiin, ka dib waxaan u baahan nahay gaari xamuul ah. Naqshadeynta gawaarida janjeerta ee caalamiga ah ayaa ah in lagu xalliyo dhibaatada qashinka culus iyo midka culus si loogu wareejiyo qashinka waaweyn, culus ee aaggooda ugu dambeeya.
450L iyo 350L awood weyn.
Laba giraangirood oo waaweyn oo xoogan oo si fudud oo habsami leh u socda.
Naqshadaynta Ergonomic ee kordhinaysa waxtarka shaqada isla markaana yareyneysa culeyska.
Naqshadeynta naqshadeynta ayaa sahleysa in qashinka uu soo baxo.
Qalabka balaastigga ah ee darajooyinkoodu sareeyo ayaa ka fudud in la nadiifiyo.
Gawaarida janjeerku waxay ka samaysan yihiin walxo caag ah oo waara, taas oo ka dhigaysa baabuurta xamuulka ah kuwo ka fudud kana raqiisan birta.
Astaamaha gawaarida janjeera waa qaab dhismeedkooda culus iyo awood balaaran oo ay ku xamuulaan culeyska culus. Laba awoodood oo kala duwan oo ah 350L iyo 450L ayaa halkan loogu talagalay, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo ku habboon isticmaalka goobaha awoodda ballaaran.
Sifada gaadhigu u janjeeraa waa naqshadda ergonomiga, taas oo hagaajinaysa waxtarka shaqada isla markaana yareyneysa culeyska fekerka marka la rarayo walxaha culus. Waxaad u isticmaali kartaa alaabtan inaad ku daabacdo walxaha ganacsiga oo dhan ama aad qashin ururiso oo aad ugu qaaddid qashinkaaga.
Intaas waxaa sii dheer, gawaaridan janjeerta ah waxay leeyihiin qoob-qaadayaal culus oo culus, taasoo ka dhigaysa mid fudud in lagu maareeyo gaadhiga bakhaarkaaga ama deegaankaaga warshadaha.
Tan ugu muhiimsan, gaari xamuulkeena janjeera waa fududahay in la nadiifiyo, waxaadna si fudud ugu dhaqi kartaa tubbo isticmaal kadib.
Shirkadeenu waxay bixin kartaa taxane ah daasadaha qashinka, gawaarida xamuulka qashinka, haamaha qashinka ee midabada kala duwan, awooda iyo qaabka. Iyada oo alaabta ceeriin ee ugu fiican iyo culeys ku filan si loo hubiyo tayada xasilloon, waxaan si naxariis leh u soo dhaweyneynaa baaritaankaaga, waxaad naga heli doontaa qiimo macquul ah.
Hore: 58L Warqad Qashin Ururinta Bin-B-016A / B-016B / B-016C
Xiga: 660L Gawaarida Qashinka Dibadda-B109
Qashinka Bin Cart
Qashinka waaweyn ee waaweyn
Bannaanka Qashinka Qashinka
Qashinka Qashinka Caaga ah
13L / 23L / 42L Balaastiig caag ah oo Square-B035 / B034 / B033
Gawaarida Gawaarida - D-011